Fampiharana 10 ho an'ny iPad Air sy iPad Mini Retina nasongadin'i Apple (I) | Vaovao IPhone
Aorian'ny fanavaozana ataon'ny Apple amin'ny iPadsMiaraka amin'ny iPad Air Mini sy iPad Mini Retina vaovao, Apple dia nanasongadina lalao lalao tsara indrindra hankafizany ny endrik'ireto fitaovana vaovao ireto.
Nanolotra lisitra iray miaraka amin'ireo fampiharana 10 voalohany nasongadin'i Apple aho. Afaka andro vitsivitsy dia hanitatra ny lisitra izahay. Araho hatrany ny bilaogy Actualidad iPad.
Avokiddo Emoticos - Fianarana milalao ho an'ny ankizy
Avokiddo Emoticos dia mamela ny ankizy amin'ny sokajin-taona rehetra hizaha fihetseham-po. Tsy misy lalàna mifehy ny fahafinaretana rehefa mianatra fahaiza-manao vaovao. Miaraha mifalifaly amin'ny zanakao rehefa mampahafantatra azy ny zebra miendrika hadalana, ondry zirafy. Ataovy miavaka ny biby amin'ireo zavatra te hanana fotoana mahafinaritra amin'ny zanakao ianao.
Avokiddo Emotions€ 3,49
Mpanoratra Abidia Chocolate Artisanal an'i Coolson
Coolson's Artisanal Chocolate dia a lalao teny mampiankin-doha, miaraka amin'ny sary fitantarana tsara sy an-tanana. Azonao atao ny milalao amin'ny maody mampientanentana, mifanohitra amin'ny namanao na amin'ny olon-kafa amin'ny Game Center.
Hevitra: Sketch Sketch
Ity fampiharana ity dia mitambatra kisarisary kanto miaraka amin'ny marindrano ny fandrafetana amin'ny fampiharana sary tsotra sy kanto. Vao tsy ela akory izay dia nofidian'ny Apple ho iray amin'ireo fampiharana tsara indrindra ho an'ny iOS 7. Ny konsep dia vahaolana isan'andro, mba hisamborana, hijerena ary hizarana ny volavola.
Amin'ny Cubasis dia azonao atao mandoro lalana am-peo amin'ny kalitaon'ny DVD ary amboary ny mozikanao. Izy io dia miaraka amina feon-javamaneno virtoaly amina am-polony izay azo lalaovina amin'ny fotoana tena izy amin'ny fampiasana ny keyboard virtoaly.
Kobasy 2€ 26,99
Ny mpamoaka boky sy tantara an-tsary lehibe indrindra any Amerika Avaratra dia DC Comics, miaraka amina karazana sy karazan-karazany maro karazana. Ny sasany amin'ireo maherifo fanta-daza indrindra dia: Superman, Batman, Jiro maitso, Flash ankoatra ny hafa.
Miaraka amin'ity fampiharana ity afaka misintona sy mankafy tantara an-tsary mahafinaritra azo alaina ao amin'ny fizarana Fanaterana Isan-kerinandro, ankoatry ny tranomboky kilasika sy angano malaza.
dJay 2 ovay ho lasa rafitra DJ ny iPad-nao feno fiasa. Ampifandraisina amin'ny tranomboky iPad, dJay dia manome anao fidirana mivantana amin'ireo hira sy lisitry ny lisitry ny tianao rehetra. Afaka mifangaro amin'ny sidina ianao na mampihetsika ny maody Autmix ary avelao i dJay hamorona fifangaroana tonga lafatra. Na matihanina ianao na mpankafy, ity fampiharana ity dia hahafaly anao.
Flipboard: Gazety fampahalalam-baovao sosialinao
Mampiasà Flipboard no fomba malaza indrindra hahatratrarana ny vaovao izay tena mahaliana anao, mahita zava-baovao na mifandraisa amin'ny olona akaiky anao indrindra. Ity fampiharana ity dia ahafahanao mankafy ny tambajotra sosialy rehetra toa ny Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr rehetra amin'ny fomban'ny magazine. Raha reraky ny rindranasa ofisialy sy ny fomba fandraisany sary ianao dia ity no fampiharana anao.
Fly Delta ho an'ny iPad
Miaraka amin'ny fampiharana Delta Airlines ianao dia afaka mizaha ireo toerana itodiana sy saran-dàlana amin'ny zotram-piaramanidiny rehetra. Miaina fahitana vaovao miaraka amin'ny fiasa Jet izay ahafahanao mahita ny toeran-kaleha misy sary an'habakabaka ary fampahalalana ara-tantara.
Ity fampiharana ity mampifangaro lahatsoratra sy sary amin'ny fomba mahomby amin'ny lohahevitra an'arivony maro toy ny zavakanto, ny fiainana dia, ny gastrolojia, ny kolontsaina, ny fizahan-tany, sns. Azonao atao ny mandefa tantara any amin'ny fiarahamonina Fotopedia ary mizara izany amin'ny namanao amin'ny alàlan'ny Facebook na Twitter.
Vondron-kintana tamin'ny afo 2 HD
Galaxy on Fire dia a Simulator ady an'habakabaka 3D, miaraka amin'ireo singa mampientanentana sy RPG. Vonjeo ny vahindanitra amin'ny fandringanana efa ho avy eo an-tanan'ireo vahiny hafetsena, jiolahin-tsambo tsy misy indrafo ary olona tsy mandoa hetra.
Galaxy on Fire 2 ™ HDmaimaim-poana
Hatreto aloha ny ampahany voalohany amin'izao. Araho hatrany ny fijerena ireo fampiharana tsara indrindra ho an'ny iPad Air sy iPad Mini Retina.
Raha mila fanazavana fanampiny - Keynote ho an'ny 22 Oktobra dia azo jerena ao amin'ny Youtube
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » iPad Air » Fampiharana 10 ho an'ny iPad Air sy iPad Mini Retina asongadin'i Apple (I)
Ny lalao fikarohana teny mahazatra dia nahafinaritra tokoa! https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sopa.letras
Torohevitra fito haka sary tsara kokoa avy amin'ny iPhone